Qarax galaaftay nolosha Zeyn oo siddeed jir ahaa - BBC Somali
Lahaanshaha sawirka Dilawar Hussein
Image caption Zeyn waxa uu qaraxa ku dhintay isaga oo sugaya walaalkii
Qoyska reer Xuseen ayaa ka mid ah qoysaska tirada badan ee murugada ay soo wajahday kaddib qaraxii sabtigii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Parachinar ee woqooyi galbeed dalka Pakistan.
Qoyskan oo ah kan ugu saboolsan dadka deegaanka ayaa waxa uu ku tiirsan yahay Jamiil Xuseen oo ah muruqmaal ka shaqeeya magaalada Karachi iyo wiilkiisa Saabil Jamiil Xuseen oo 15 sano jir ah oo ka shaqeeya dukaan ku yaala Parachinar oo lagu iibiyo digaag.
Altaf Jamiil Xuseen oo 12 sano jir ah isla markaana ah da'da ka yar Saabil, waxa uu subax kastaa gaarigacan uu la aadaa suuqa khudaarta, halkaa oo uu ka kireeyo ganacsatada khudaarta ee doonaya in khudaarta loo geeyo dukaamadooda.
60 askari oo lagu dilay dalka Pakistan
Saabil waxaa maalin kastaa suuqa u raaci jiray walaalkii oo siddeed sano jir ah oo lagu magacaabo Zain Xeydar oo suuqa ka soo uruurin jiray khudaarta bololka ah ee ay dadka ku tuureen suuqa gudahiisa, si qoyskiisa ay u cunaan.
Maalintii sabtiga ahayd, xilli Zeyn uu khudaar balool ah bac ku uruursanayay ayaa Altaf waxa u yimid qof ganacsade ah oo ka codsaday in uu alaab u qaado, taa oo uu ka yeelay basle waxa uu ka codsaday walaalkii Zeyn in uu halkaa ku sii sugo oo uu u soo laaban doono marka uu alaabta u qaado qofkan ganacsadaha ah.
Daqiiqado kaddib qarax ayaa suuqa ka dhacay, waxaana cirka isku shareeray qiiq, uuro, habaas iyo waliba firirka waxyaabihii suuqa lagu iibinayay.
Image caption Qaraxa ayaa waxaa ku nafwaayay dad aad u badan
"Altaf uma aysan suurtagelin in isla markiiba uu u soo laabto Zeyn, sababtoo ah waxaa jiray jahawareer, dadkuna dhinac kastaa ayay u ordayeen; ayuu yiri Saabil oo dukaanka uu ka shaqeeyo uusan ka fogayn goobta uu qaraxa ka dhacay.
"Soddon daqiiqo kaddib xaafadda ayaan aaday, waxa aanan la kulmau Alta foo naxsan. Waxa uu sheegay in uusan arkin Zeyn balse uu helay kabahiisa, sarwaalkiisa oo jeex-jeexan kuwaa oo uu xaafadda keenay"
Zeyn waxa isbitalka geeyay qaar ka mid ah dadka suuqa joogay oo uruurinayay meydadka iyo dadka dhaawaca ah, waxaana la ogaaday in uu geeriyootaday.
25 qof ayaa markiiba goobta uu qaraxa ka dhacay ku dhimatay.
Weerarkan ayaa ahaa kii siddeedaad ee ugu dhimashada badnaa tan iyo sanadkii 2007-dii. Dad ka badan 500 oo qof ayaa ku dhintay weeraradaasi, qaar kale oo bandanna waxa ay ku nafwaayeen weerarro kale.
Madaxa golaha dhaqanka ee qabaa'ilada deegaanka Xaaji Faaqir Xuseen ayaa sheegay in magaalada Parachinar ay tahay magaalada labaad ee mintidiintu ay bartilmaameedsadaan, waxa ayna ku xigtaa magaalada Peshwar.
Dagaalka lagula jiro Taalibaan
Qaraxani u dambeeyay ayaa ku soo beegmayo usbuucyo kaddib markii taliyaha guuto ka tirsan ciidamada milatariga dalka Pakistan ee saldhiggoodu yahay gobolkaasi uu ku amray qabaa'ilada deegaanka in ay hubkooda culus ku soo wareejiyaan gacanta dowladda maalmaha ugu horreeya bisha Febraayo ee sanadkan.
Deegaannada qabaa'ilada ka taliyaan ee dalka Pakistan ayaa noqday meel lagu kaydiyo hubka culus ee gaarka loo leeyahay, arrintaa oo ka sii dartay sababo la xiriira colaaddii dalka Afqaanistaan ee sanaddadii 1980-meeyadii.
Image caption Burbur ba'an ayaa gaaray Suuqa khudaarta ee Parachinar, waana weerarkii siddeedaad muddo toban sano.
Labo qabiil oo kala ah Turi iyo Bangash oo deggan Kurram ayaa waxa ay leeyihiin bakhaarro lagu keydiyo hubka fudud, qoryaha waaweyn, gantaalada garabka laga rido iyo xitaa qaar ka mid ah hubka lidka diyaaradaha, kuwaa oo ay qabaa'illadani maamulaan. Waxaana hubkaasi lagu hayaa bakhaarro ku yaala dhowr goobood oo ku teedsan xudduudda Kurram Agency oo magaalada Parachinar ay xarunta u tahay.
Qabaa'illadani ayaa labo arrimood u cuskanaya sababta ay u diidan yihiin in ay wareejiyaan hubkooda.
Midda koobaad, Kurram waa degmada kaliya ee ka mid ka ah dhulka qabaa'ilka ka taliya ee dalka Pakistan ee ay deggan yihiin dad Shiica ah.
Degmadan ayaa saddex dhinac ka jira dhul ka tirsan dalka Afqaanistaan, halkaa oo ay xarumo ka sameysteen kooxo lala xiriiriyo Taalibaanka Pakistan iyo kooxda la abxday Dowladda Islaamka oo dhammaantood citiqaadsan mad'habta sunniga oo aad uga soo horjeedda Shiicada, kuwaa oo ay u arkaan in ay baalmareen diinta isla markaana ay waajib ku tahay in ay adduunka ka tirtiraan.
Degmadan ayaa sidoo kale waxa ay halis kala kulmeysaa deegaanada kale ee ku yaala bariga Pakistan oo tan iyo sanadkii 2014-kii xarun u ahayd kooxo mayal adag oo Sunni ah.
Image caption Tuuladan oo shiico ay degnayd ayaa waxaa burburiyay colaaddii u dhaxeysay qabiilka Turi iyoTaaliban
Labadani qabiil ayaa sanaddadii 2007 iyo 2008-dii waxa ay dagaal ba'an la galeen kooxda Taalibaan ee dalka Pakistan, waxa ayna ka horjoogsadeen in kooxdani ay qabsato goobo muhiim ah isla markaana ay halkaa uga duusho magaala madaxda dalka Afqaanistaan ee Kaabuul.
Waxa ay sidoo kale qaadeen hawlgallo ka dhan ah qabaa'illada Sunniga ah ee deggan dhanka galbeed, si ay xudduudadhooda uga ilaashadaan mintidiinta Sunniga ah ee doonaya in ay ku dhex milmaan bulshada halkaa deggan.
Arrinta labaad ayaa ah shaki ay ka qabaan ujeedada iyo awoodda ciidamada milatariga ee dowladda, taa oo ah in ay deegaanadooda difaaci karaan iyo in kale.
"In kastoo milatarigu uu ku andacoonaya in uu na difaaci karo, haddana marnaba ma illaawi karno in dowladdu ay garabkanaga ka baxay markii Taalibaanku ay na soo weerareen oo ay qabsadeen dhulkayaga isla markaana ay xoog ku galeen Parachinar," sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha qabaa'illadan.
Waxa uu intaa ku daray in aysan doonayn in ay marnaba hubkooda wareejiyaan.
Xaaji Faaqir Xuseen waxa uu leeyahay in hubkooda ay wareejiyaan waxa ay ka dhigan tahay in ay iska wareegiyaan waxa kaliya ee ay naftooda ku ilaashanayeen.
Image caption Dadkii lagu laayay Parachinar ayaa isla markiiba la aasay.
"Waxaa nagu hareereysan Taalibaan iyo Daacish sida ilkaha ay ugu hareereysan yihiin carrabka. Waligeen kama aanan hor imaan danaha dowladda, mana la dagaalami karayno balse waxaan doonaynaa in ay ogaadaan in hubkanaga oo aan iska wareejina ay ka dhigan tahay in carruurtayada iyo xaasaskayaga aan ku wareejinno cadowga oo aan waliba u fasaxno in ay ka yeeshaan sida ay rabaan," ayuu yiri Xaaji Faaqi.
Dadka deggan Kurram ayaa weerarkii sabtigii ka dhacay Parachinar u arkaya in uu caddeyn u yahay in aysan ka badbaadayn mintidiinta dagaalka kula jira dadka Shiicada ah.
Waxaa sidoo kale ay qabaan cabsi ah in dowladddu ay weerarkaasi ku eedeyso dadka shiicada ah, taana ay keento in dowladda ay xoog ku maquuniso oo ay hubka kala wareegto.
Sajid Xuseen Turi oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Pakistan isla markaana ka soo jeeda Kurram ayaa cambaareeyay xarigga toddobo qof oo laamaha ammaanka ay u soo qabteen weerarkaasi, kuwaasi oo uu sheegay in ay ahaayeen dad ka tirsan qabiilka Turi oo khudaar ku iibinayay suuqa, waxa uuna dowladda ugu baaqay in ay raadsato Taalibaanka oo sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi.
Xilli qabaa'illada shiicada ah ee Kurram ay u ololeynayaan in ay hubkooda sii haystaan ayaa dhanka kale qoyska Zeyn Xeydar waxa ay isku dayaan in ay ku samraan geerida wiilkooda.
"Aabahay nolal adag ayuu ku jiraa, Karachi oo ah halka uu ka shaqeeyana aad ayay u fogtahay, kharash badan ayaana ku baxaya safarkiisa. Marka uma aanan sheegin geerida Zeyn," ayuu yiri Saabil.
Saabil waxa uu hadda la daalaa dhacayaa sidii uu u daryeeli lahaa hooyadii oo ay sonkorta ku kacday kaddib geeridii Zeyn.
Arrinta kale ee murugada leh ayaa ah waxa ay u sheegayaan aabahood, waayo horey uguma aysan sheegin geerida wiilkiisa.